BB foundation (30ml) အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
BB foundation (30ml)
ကြည့်သူအရေအတွက်: 43 (+1)
အရမ်းကောင်းတဲ့ BB foundation လေးပါနော်....
BB Foundation လေးဟာ
💕မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမဲစက် နေလောင် ဒဏ်ရာ
တင်းတိတ်များကိုပါ လျော့နည်းစေကာ အသားအရေကို
💕စိုစွတ်မှုကိုတနေ့လုံး ထိန်းသိမ်းပြီး တစ်နေ့တာလုံး
💕နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးသောကြာင့် အသားအရည် ပျက်စီးမှုကိုမဖြစ်စေပါဘူးနော်။
cream လိမ်းတဲ့အခါ လက်ညှိုးလေးနဲ့ အသာတို့ပြီး
မျက်နှာပြင်အနှံ့ လိမ်းပေးရပါမယ်။ပြီးရင် ကိုယ်ရဲ့
အသာလေး ခပ်ဖွဖွလေး လက်ငွေ့လေးနဲ့ မျက်နှာပြင်ကို
ပုတ်ပြီး လိမ်းပေးရပါမယ်ရှင်။ ဒါမှ မိတ်ကပ်သားက
အသားထဲကို စိမ့်ဝင်ပြီး မိတ်ကပ်သား တနေကုန် ခံပြီး
🔯 နယ်မြို့များအထိ အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်။
👉 နယ်မြို့များကို မြို့အလိုက်
** Deliver Charges. ပေးရမှာဖြစ်ပြီး
** မန္တလေး.. အမရပူရ.. စစ်ကိုင်း.. နေပြည်တော်
** ထားဝယ်.. မြိတ် ..မကွေး.. ပြည်.. မော်လမြိုင်
** မိတ္ထီလာ.. ပျော်ဘွယ်.. ဟသာင်္တ. .မုံရွာ.. အုတ်ဖို
** အေးမြသာယာ.. ပိုးဟပ်ကုန်း.. စသောမြို့များကို
** အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်သောစနစ်** ဖြင့်
🔯ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင် 🔯
အမည်: BB foundation (30ml)